YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, February 23
ကိုသန်းဝင်း (ရ.က.သ. ၈၈ )ပြောတဲ့ ကိုဖုန်းမော် ကစတဲ့ ၈၈၈၈
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/23/20110အကြံပြုခြင်း
two headed snake and Surprising Rock
ဆော်ဒီကကျောက်တုံး မိနစ်30လေထဲကြွတက်တဲ့ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပ်-
They say that 17 years ago, one terrorist was shot dead behind this rock as he was hidden there. This encounter happened in the month of April 1989. You can see the fresh blood stains on the rock. Most surprisingly, when the rock raises from the ground, these stains become darker, fresher and wet. Local residents tried to wipe off the stains several times, but after some time it appears again on the rock automatically......
အခေါက်အပွေး၊ အသွေးအရောင်နှင့်စေ့ထားသည့်တံခါး (မျိုးမြင့်ချို)
by Myo Myint on Sunday, February 20, 2011 at 12:09pm
ကျနော်စစ်သင်တန်းတက်တော့ စက်ပစ်ကွင်းဆင်းရ၏။ ကိုက်သုံးရာအကွာတွင် လေးပေပစ်မှတ်ကိုထောင်ထားပြီး တယောက်ကို ကျည်ဆံ ၅တောင့်နုန်းဖြင့် ပစ်မှတ်၏ဗဟိုချက်တည့်တည့်ကို ပစ်ခိုင်းခြင်း။ ၅တောင့်လုံး မှန်အောင်ပစ်နိုင်သူအား “ကျည်စု”ဆု ပေး၏။ ၅တောင့်လုံး မှန်သူများလည်းရှိ၏။ ဗဟိုကိုထိတန်သလောက်ထိပြီး လေးပေပစ်မှတ်၏ အခြားနေရာများကို ထိသည်များလည်းရှိ၏။ ရည်ရွယ် ချက်က “ဗဟိုချက်ကို ပစ်ရန်နှင့်ထိရေး”။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံအချို့က န.ဝ.တ၊ န.အ.ဖ စစ်အုပ်စုထိပ်သီးများ၊ ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊ ယင်းတို့၏ ပုလင်းတူဗူးဆို့များအပေါ် ပစ်မှတ်ထားပြီး စီးပွားရေးအပိတ်အဆို့ အဟန့်အတားလုပ်ထားသည်ကို လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်၏။ ထိုတွင် ယင်း တို့၏နိုင်ငံခြားဘဏ်များရှိ ငွေသားနှင့်အခြားအပ်နှံထားသည့်ပစ္စည်းများပါ ထုတ်မရတော့။
န.အ.ဖက ထိုလုပ်ဆောင်မှုကို “စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု” ဆိုသည့်ဝေါဟာရဖြင့် လူထုအားမှိုင်းတိုက်၏။ ဗူးလုံးနားမထွင်းဖြစ်အောင် လုပ် ထား၏။ လူထုနားတွင် “စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု” ဟုကြားလိုက်သည်နှင့် စိတ်တွင် “ငါတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတာပါလား” ခံစားစေလိုရင်းဖြစ်၏။ သဘောက “ဗဟိုချက်အားချိန်၍ ပစ်ခြင်းနှင့်ထိရေး” ကို “လေးပေပစ်မှတ်အား ပစ်ခြင်းနှင့်ထိရေး” ဖြစ်သယောင် ဝါဒဖြန့်ခြင်း။
တလျှောက်လုံး သူတို့ကိုင်ထားသည့် မီဒီယာများမှ “စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာ တို့မမှုပါ” ဟု ကယောင်ကတမ်း အော်သံများညံနေ အောင်ကြားရသလို၊ တဖက်မှလည်း “စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် တိုင်းပြည်ကြီးဘယ်လောက်ပျက်စီး” ဟုပြောနေပြန်၏။ မည်သို့ နားလည်ရ မည်နည်း။ မမှုသူသည် နာကျင်သည်ဟုငြီးတွားပြီး ပျက်စီးပါပြီဟုမပြော။
“တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီး”နေသည်မှာလည်းမှန်၏။ “စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု” အလုပ်ခံထားရသည်လည်းမှန်၏။ သို့သော် “စီးပွားရေးပိတ် ဆို့မှုနှင့်တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးခြင်း” ကို တတွဲတည်းကြည့်ပါက “လုံးရိုက်သည့်အမြင်နှင့်ဝေဝါးသည့်ကောက်ချက်” သာထွက်မည်။ ၁၉၆၂မှ ၁၉၈၈ အထိ ဗမာပြည်ကို ဘယ်သူမှစီးပွားရေးအပိတ်အဆို့မလုပ်။ မရှိ။ တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြွယ်ဝဆုံးတိုင်းပြည်သည် ဘာ ကြောင့် ၁၉၈ဝ ဝန်းကျင်ရောက်တော့ “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံ”စာရင်းဝင်သွားရသနည်း။ တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးရ၏။ မည်သူ ဖျက်ဆီး သနည်း။
ဒီဘက်ခေတ် နှစ် ၂ဝ ကျတော့ ဘာကြောင့်အပိတ်အဆို့တွေ ကြုံလာရသနည်း။ ဒီဘက်ခေတ် အနှစ် ၂ဝ ခရီးတွင် တိုင်းပြည်ကြီး ပို၍ယိုယွင်းပျက်စီးလိုက်လာသည်မှာ ပြောစရာမရှိ။ ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ကြရသူများ၊ တတိယနိုင်ငံတွင်အခြေချနေရသူများ၊ ပြည့်တန်ဆာ များ၊ အိမ်ဖေါ်များ၊ ဒုစရိုက်မှုများ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ အဓမ္မလုပ်အားပေး၊ ကလေးစစ်သား၊ ပေါ်တာ၊ တောင်းရမ်းစားသောက်ရသူများ၊ ရောဂါဘယများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ တကြော့ပြန်ပြည်တွင်းစစ် စသည်တို့နှင့် လုံးလည်လိုက်နေကာ အဆင်းရောအချင်းပါ အဖျက်ဆီးခံနေရ၏။ ခါးမလှဝမ်းမဝ။ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး၏ဥပဓိ (Identity of nation and nationality) မြင်မကောင်းအောင်ပုံပျက်ရ၏။ မည်သူဖျက်သနည်း။
ယခု သူတို့ လမ်းပြမြေပုံနောက်ဆုံးခြေလှမ်း ပြီးလုပြီ။ ယခင်က သူတို့ပြောချင်သည့်စကားကို သူတို့နှုတ်ကထွက်ရ၏။ ယခု သူတို့ စကားအတွက်ပါးစပ်အငှားလည်းရပြီ။ လွှတ်တော်တွင်းက အငှားပါးစပ်တို့ကိုပြောခိုင်း၏။ ပြောလည်းပြော၏။ ပါးစပ်အငှားနှင့်ပြောတာက “တာ” ပိုသွားမည်ကိုလည်းသိ၏။ သူတို့တုန်းက “တို့မမှုပါ” နှင့် “တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီး”လောက်ပဲ ပြောလို့ရသည်။ ပြောလို့ကောင်းသည်။ အငှားပါးစပ်နှင့်ကျတော့ “တို့မမှုပါ” ထဲ့ပြောလို့မကောင်း။ မဖြစ်။ ဆိုတော့ “ဘာမှမထိရောက်ပါ” “လူထုသာနာသည်” ဆိုပြီး ပြင်ပြောခိုင်းရ၏။
လူထုက အခုမှကောက်ကာငင်ကာ “ထ”နာခြင်းမဟုတ်။ ၆၂ ခုကတည်းက နာလာသည့် အနာဟောင်းအနာဆွေး။ သွေးတိတ်ဖို့ ခက်၏။ အနာ၏ဇစ်မြစ်ကိုသိသိနှင့် ဆေးချက်မှန်ကိုမပေးပဲ ရေမန်းဆီမန်း ဥုံဖွအပ်ချလောင်းဖြင့်မရ။ နောက်တချက်က မထိရောက်ဆိုခြင်း။ မှန်၏။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတခုတည်းဖြင့် နိုင်ငံတခု၏စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးအဆောက်အဦတခုလုံး ပြောင်းလဲသွားရသည့်သာဓက ကမ္ဘာပေါ် တွင်မရှိခဲ့။ ခေါင်းဆောင်တို့၏ နိုင်ငံရေးရေချိန်နှင့်အဆုံးအဖြတ်၊ လူထု၏လိုက်ပါနိုင်မှု၊ နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းနှင့်အခြေအနေ စသည်တို့ ကို ပိတ်ဆို့မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရ၏။
၅ တောင့်လုံးမမှန်သဖြင့် မထိရောက်ဟု ပြောလို့မဖြစ်။ မထိရောက်ဆိုလျှင် ဘာလို့အချိန်ကုန်လူပန်းအာညောင်းခံကာ “ရုပ်ပေးပါ၊ ရုပ်ပေးပါ” ဟု အငှားပါးစပ်တို့က တစာစာအော်ကြရသနည်း။ ရှင်းပါသည်။ အရောင်အသွေး အမွှေးအတောင်တူသည့်ငှက်များ အုပ်စုဖွဲ့ပျံသန်း ကြခြင်းဖြစ်၏။
ပိတ်ထားတာကိုဖွင့်ပေးပါဟု အော်နေခြင်းသည် လက်တွေ့နိုင်ငံရေး၏ ပကတိလိုအပ်ချက်မဟုတ်။ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရန်၊ တောတွင်းကပြန်လာလိုသူများ ဘေးသီရန်မခပြန်လာနိုင်ရန်၊ ၊ အချိန်ကာလတခုသတ်မှတ်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများလုပ်ရန်သာ လက်တွေ့၏တောင်းဆို လိုအပ်ချက်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဖွင့်ပေးပါ ပြောစရာမလို။ စေ့ထားသည့်တံခါး အလိုလိုပွင့်၏။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အမြန်ဆုံး ရပ်သိမ်းပေးပါ
by Soe Wein Yan Htoon
ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်းတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်စိမ့်သောငှာ နိုင်ငံတော်မှ အစဉ်အမြဲ တွေးတော ကြံဆလျှက် ရှိရာ ယနေ့တွင် ခေတ်မီမီ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်၏ စီးပွားရေး စနစ်ကို တည်ဆောက်ရန် အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိနေပါသည်။
ခေတ်မီသော နိုင်ငံတကာနှင့် လျှော်ညီသော စီးပွားရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းစေရန် အလို့ငှာ နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ယူထားသော လုပ်ငန်းရပ် အသီးသီးတို့ကို ပြည်သူပြည်သားတို့ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရစေသော အလို့ငှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းများလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁)မကြာမီ အချိန်အတွင်းတွင် လမ်းဘေး ကွမ်းယာဆိုင်များကို အများဆိုင် လေလံစနစ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနှင့်အတူ မုန့်ပြားသလပ်ဆိုင်၊ အကြော်စုံဆိုင် များကိုလည်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
(၂)မကြာမီ အချိန်အတွင်းတွင် ဇီးထုပ်စက်ရုံ၊ အာလူးကြော်စက်ရုံ၊ ငရုတ်သီးမှုံလှော်စက်ရုံ နှင့် အခြားအခြားသော စက်ရုံကြီးများကို ကျယ်ပြန့်သော ပုဂ္ဂလိက လုပ်ပိုင်ခွင့်များအဖြစ် ချမှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃)မကြာမီ အချိန်အတွင်းတွင် ရပ်ကွက်လမ်းမကြီးများ၊ အိမ်နောက်ဖေး လမ်းကြားများ၊ အမှိုက်ပုံလမ်းများ၊ လယ်ကွင်းလမ်းများ၊ လမ်းကြို၊ လမ်းကြား၊ လမ်းမြှောင်၊ လမ်းလျှိ များကိုလည်း ပုဂ္ဂလိက လုပ်ပိုင်ခွင့်များအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်တော့ မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၄)ယင်းလမ်းများပေါ်တွင်မော်တော်ယဉ်များရပ်ခြင်း၊ ကုန်တင်ကုန်ချပြုလုပ်ခြင်း၊ (ဥပမာ- လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့တွင် ဆိုင်ကယ်ရပ်ကာ ပါဆယ် လှမ်းဝယ်ခြင်း မှအစပြုကာ) လမ်းရပ်ခ ကောက်ခံခြင်းများကိုမူ သီးသန့် လေလံစနစ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၅)ရေစည်လှည်းတွန်းလုပ်ငန်း၊ ဆိုက်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကူလီထမ်းခြင်း လုပ်ငန်း မှ အစ သူတောင်းစားလုပ်ငန်းများအထိ လုပ်ငန်းအ၀၀ တို့ကို ရေစည်လှည်း အင်တာပရိုက်စ် များအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဆိုက်ကားကော်ပိုရေးရှင်းများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သူတောင်းစား ဂရုပ်အော့ဖ် ကမ်ပနီများအဖြစ်လည်းကောင်း တရားဝင် လိုင်စင်များဖြင့် ချမှတ်ပေးနိုင်ရန် နောင်လာမည့် လွှတ်တော်တွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒပညာရှင်ကြီးများက သုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၆)မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ပက်သက်ပြီးလည်း ၀က်သားဒုတ်ထိုး အမြန်နူးအိစေသောနည်းလမ်း မူပိုင်ခွင့်၊ မုန်လာဥချဉ်ရည်ဟင်းချက်ရာတွင် မုန်လာဥအနံ့မထွက်စေသောနည်းလမ်း မူပိုင်ခွင့်၊ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်တည်းဖြင့် တစ်ညလုံး အိမ်စာလုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် စသည်ဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၇)နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်စေရန်အလို့ငှာ ကောက်ညှင်းပေါင်းအိတ်စပို့၊ ပဲပြုတ်အိတ်စပို့၊ ထမင်းဆီဆမ်း အိတ်စိပို့၊ စသည်ဖြင့် အင်တာနေရှင်နယ် အိတ်စပို့ လုပ်ငန်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လည်း ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၈)ခေတ်မီသော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံတော် ဖြစ်သည်နှင့် အညီ အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားတာ ဘာဖြစ်လဲ ဟုပြောဆိုပါက မိမိထမင်း မိမိစားသည့်အတွက် စားသုံးသူ အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ (နိုင်ငံတော်မှကျွေးသောထမင်းကိုစားသည်ဟုပြောပါရန်)
အများသုံးအိမ်သာများတွင် ၀င်ရောက်သုံးစွဲပါက သုံးစွဲခနှင့်အတူ စားသုံးသူ အခွန်ငွေအဖြစ် ယင်းသုံးစွဲခမှ (၃) ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပေါ့သွားလျှင် (၂) ရာခိုင်နှုန်း၊ အလေးသွားလျှင် (၃) ရာခိုင်နှုန်း။ အဆင့်မြင့် အဲယားကွန်း လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားသော အိမ်သာသုံးစွဲပါက ပိုမိုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
လမ်းဘေးဈေးသည်များဖြစ်ပါက (၁) ဈေးကောက်၊ (၂) မြို့တော်စည်ပင်အလှူခံ၊ (၃) ရပ်ကွပ်ရံပုံငွေ အလှူခံ၊ (၄) မြို့နယ် ရံပုံငွေ အလှူခံ၊ (၅) တိုင်းဒေသကြီးရံပုံငွေ အလှူခံ စသည်ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ရောင်းရငွေများမှ ၀င်ငွေခွန်များကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၀င်ငွေခွန် ပေးဆောင်ကြရန် ဥပမာ- ကွမ်းယာတစ်ယာရောင်းရလျှင် ၀င်ငွေခွန်မှ (၁%)၊ ယင်းကွမ်းယာတွင် ဗမာဆေး၊ ဖာလာ ဖြင့်ယာထားပါက (၂%)၊ နှပ်ဆေးရည် အုန်းသီးကြော်ဖြင့် ယာထားပါက (၃%) စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားအလိုက် ၀င်ငွေခွန် ဆောင်ရန်လိုပါသည်။ (ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ဈေးရောင်းပါက ပလက်ဖောင်းကြေးအဖြစ် ထပ်မံ အခွန်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်)
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝသယံဇာတ လုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စသည်ဖြင့် သေးသိမ်သေးမွှားသော လုပ်ငန်းများတို့မှာမူ လုပ်ငန်းသေးများ ဖြစ်သဖြင့် အလွန်တရာ အန္တရာယ်များလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းလုပ်ငန်းများကိုမူ အခြားသောလုပ်ဖူးလုပ်စ ရှိသူများမှအပ ပြည်သူတို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ချမှတ်ပေးခြင်း မပြုပါရန် လွှတ်တော်မှ ပြည်သူတို့ အကျိုးမျှော်ကိုးကာ ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။
ယင်းသို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နေသော်ငြားလည်း အနောက်နိုင်ငံကြီးများမှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် အမေရိကန် ဂျုံမှုံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပလာတာများ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ကြက်ဥများ၊ ဂျာမဏီ နိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးသော ဥရောပကန်စွန်းရွက်များ၊ မက်ဆီကို အမွှေးအကြိုင်ဖြင့် ယာထားသော ကွမ်းယာများ၊ စပိန်နိုင်ငံထုတ် ဘဲဥများ၊ နယူးဇီလန် မုန့်ပြားသလပ်များ၊ ရုရှား နိုင်ငံထုတ် ထွေးညိုများ စသည်တို့ကို အခြားနိုင်ငံတိုင်းပြည်များနည်းတူ စားသုံးနိုင်ခွင့်မရှိသေးဘဲ အထွေထွေ ကုန်ဈေးနှုန်းများဖြစ်သော ကန်စွန်းရွက်၊ စားတော်ပဲ၊ ကြက်ဥ၊ ကြက်သား၊ ဘဲဥ၊ ၀က်သား၊ ဒိန်ညင်းသီး၊ ခရမ်းသီး၊ ဂေါရခါးသီး၊ ကြက်သွန်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ၀ါ၊ နှမ်း၊ ၀ါဂွမ်း၊ ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက်၊ ဂုဏ်လျှော်၊ ကျောက်စိမ်း၊ နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ စသည်စသည်တို့သာမက အခြားအခြားသော ဈေးနှုန်းများမှာလည်း ကြီးမြင့်လျှက် ရှိနေသည်ကို တိုင်းသူပြည်သား အားလုံး သိရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အနောက်နိုင်ငံကြီးများ၏ စီးပွားရေပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ပြည်သူများအဆင်မပြေဖြစ်ရသည်ကို လက်တွေ့အားဖြင့် အထက်ပါ အချက်များက ဖော်ပြနေကြောင်း မိမိတို့မှ ဆန်းစစ်သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းစီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ကြီးကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးပါရန် ပြည်သူများက ၀ိုင်းဝန်း တောင်းဆိုကြပါဟု ကျွန်တော်များက ပြည်သူ့အကျိုးမျှော်ကိုးကာ လေးစားစွာ ပန်ကြား တောင်းပန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု လူနည်းစု ၀ဖြိုးရေးပါတီ
‘အာဇာနည်’ အဖြစ်နဲ့ သေမည်ဟု ၇၈ မိနစ် ကြာ ရူးကြောင်ကြောင် မိန့်ခွန်း ကဒါဖီ ပြော
Wednesday, 23 February 2011 01:41 မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း
“ဒီတိုင်းပြည်ဟာ ကျုပ်တိုင်းပြည်၊ ကျူပ်အဘိုးအဘွား တွေ ပေးခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်၊ ကျူပ်သွေး နောက်ဆုံး တစက် ကျတဲ့အထိ ဆက်တိုက်သွားမယ်။ ပုန်ကန်သူတွေကို တစ်အိမ်တက်ဆင်း မြေလှန်ရှင်းမယ်။ အာဇာနည်
သူရဲကောင်းဘ၀နဲ့ ကျူပ်သေမယ်” ဆိုပြီး ၄၁ နှစ်ကြာ လစ်ဗျားနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေသူ၊ အသက် ၆၈ နှစ်ရှိ မွမ်မာ ကဒါဖီက အင်္ဂါနေ့ တွင် ၇၈ မိနစ်ကြာ တောင်စဉ်ရေမရ မိန့်ခွန်းရှည်ကို ဒေါကြီးမောကြီး အော်ဟစ် ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
ရှစ်ရက်ကြာ ဆန္ဒပြသူများက လစ်ဗျားနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို သိမ်းပိုက်ထားချိန်တွင် ကဒါဖီ ရဲ့မိန့်ခွန်းကို လစ်ဗျား ရုပ်သံကနေ တိုက်ရိုက်လွှင့်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကဒါဖီက ညိုညစ်ညစ် အ၀ါရောင် ခေါင်းပေါင်းနဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ရုံကို ခြုံပတ် ထားသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ် အမေရိကန် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပျက်ဆီးသွားတဲ့ နှစ်ထပ် အဆောက်အဦ ပျက်ကြီး ထဲကနေ စတန့်ထွင် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူ့မိန့်ခွန်းမှာ မြန်မာပြည်မှ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း ဆင်းပေးခါနီး “စစ်တပ်က ဘယ်တော့မှ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး၊ ပစ်ရင် တည့်တည့်ပစ်တယ်” ဆိုတဲ့ လူထုကို စိန်ခေါ်သံမျိုးနဲ့ ဆင်နေပြီိး၊ န၀တ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး စောမောင် ပြုတ်ခါနီး ရူးကြောင်ကြောင် မိန့်ခွန်းရှည်လို တောင်ရောက်မြောက်ရောက် စိတ်ဂဃာမငြိမ်ဖြင့် ပြောဆိုခြင်းမျိုး ဖြစ်နေသည်။ စကား ပြောရင်း စာအုပ်တွေ ကောက်ဖတ်ပြသည်။ အနောက်နိုင်ငံ အေးဂျင့် ‘ကြွက်တွေ’ က လစ်ဗျားကို မငြိမ်မသက် ဖြစ်အောင် ထိုးမွှေဖျက်ဆီးနေတယ် ဟု အပြစ်တင်လိုက်သေးသည်။
လက်ရှိ လစ်ဗျားရဲ့ ၀ရုန်းသုန်းကား အခြေအနေကို သုံးသပ်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ကဒါဖီက ဘ၀င်စိတ်နဲ့ ကြောက်စိတ် ရောမွှန်နေပြီး “မွမ်မာ ကဒါဖီ ဆိုသူမှာ သမိုင်းရှိတယ်၊ ခုခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ တော်လှန်ရေး ရှိတယ်၊ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်မှု ရှိခဲ့တယ်” ဟုလည်း ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ ဗလုံးဗထွေးနဲ့ အော်ဟစ်ရင်း ဗင်နီဇွဲလားကို ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း “ကျူပ်ဘက်နဲ့ပေါင်းရင် စကောလားရှစ် ပေးမယ်” ဟုလည်း မက်လုံးပေးလိုက်သေးသည်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ AK-47 ကိုယ်စီ ကိုင်ထားသူ ဆန္ဒပြလူထုက လမ်းပေါ် တွေကနေ သူ့မိန့်ခွန်းကို နားထောင်ပြီးနောက်၊ နာရီပိုင်း အတွင်း အပြတ်ဖြုတ်ပစ်မယ်ဟု ကြွေးကြော်အော်ဟစ် ကြသည်။ အချို့က စစ်တပ် လက်နက်တိုက်များကို ၀င်စီးကြသည်။ မနေ့က ထရီပိုလီမြို့တော်တွင် ဆန္ဒပြ သူ ၆၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ဘန်ဂါဇီ မြို့တွင် ၂၃၃ ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။ ရှစ်ရက်အတွင်း ဆန္ဒပြသူ ၈၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ သည်ဟု Human Rights Watch အဖွဲ့က ခန့်မှန်းသည်။
အမေရိကန် စီနိတ်တာ ဂျွန်ကယ်လီ က “ခွေးရူး နာရီပိုင်းပဲ ခံတော့မယ်” ဆိုပြီး ကဒါဖီ ဆင်းရတော့မယ့်အကြောင်း CNN သတင်းဌာနတွင် သုံးသပ်ခဲ့သည်။ လစ်ဗျား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နှုတ်ထွက်သွားပြီး ဆန္ဒပြသူများနှင့် ပူးပေါင်းလိုက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းရှိ လစ်ဗျားသံအမတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ သံအမတ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ လစ်ဗျားသံအမတ်၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လစ်ဗျား သံအမတ်တို့က ကဒါဖီ ဆင်းပေးဖို့နဲ့ ‘လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှု’ အတွက် ကုလသမဂ္ဂတပ်များ ကြားဝင်ဖို့ ပူးတွဲကြေငြာချက် ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကေင်စီက အာရပ်တော်လှန်ရေးများ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေစဉ်အတွင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က ပထမ ဆုံးအကြိမ် တံခါးပိတ် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး လုပ်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက လစ်ဗျားအစိုးရဲ့ အပြစ်မဲ့ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရက်စက်မှုကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး၊ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် မိုက်ခ် မူလန်က ‘လစ်ဗျား စစ်တပ်က သူ့ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်နေတာ ပြင်ပ ကမ္ဘာက လုံးဝ လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းမယ့် အရိပ်အမြွက်စကား ပြောကြားလိုက်သည်။
မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း Source: CNN & The New YorK Times
ARBOURFIELD ., LTD.ကုမ္ပဏီမှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိန်ဖေ (ငြိမ်း) ပြည်ပသို့ လိမ်လည်ပြီလူပို့ဆောင်နေ
ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ARBOURFIELD ., LTD. Manpower Agency ( LC.015/ 200) အုပ်ချူပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိန်ဖေ (အငြိမ်းစာ) အမှတ်(၁၄၇)၊ မြေညီထပ် လမ်း (၅၀)၊ အပေါ်ထပ်ဘလောက် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှ ပြည်ပသို့ ပို့ဆောင်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်လာတဲ့အလုပ်သမားပြဿနာ အ၀၀ကို လုံးဝ လုံးဝ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိဘဲ မြန်မာပြည်ကနေ မလာခင်ကာလမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့် လိမ်လည်ပြောဆိုပြီ လာချင်တဲ့စိတ်တွေ စိတ်ဝင်စားလာအောင် နိုးဆွပေးခဲ့ပါတယ် မြန်မာအလုပ်သမားတွေက မလေးရှားနိုင်ငံကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုပါက တစ်လကို ရင်းဂစ် ၁၂၀၀ အထိ ရအောင် လုပ်ပေးမည်ဟု အာမခံ ကတိပေးခဲ့ပြီ တကယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံကို လာရောက်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက တခါတည် လက်ငင်ပေးချေ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်းအတိ ပေးချေခဲ့ရပါတယ် အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေအများအပြားပာာ သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင် ရစေမည်ဟု ထင်ခဲ့ပြီး (၁၀-၅-၂၀၁၀) ရက်နေ့က မြင့်စိုး၊ အောင်သူတို့အပါအ၀င် မလေးရှားနိုင်ငံကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မဲ့အလုပ်သမား (၅)ဦးကို မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး မလေးရှား တရုတ်အေးဂျင့်ပွဲစား Mr. Sam Chong ဆီးထံသို့ တဆင့်ကမ် ပြန်ရောင်းစာပြီ Mr. Sam Chong အေးဂျင့်လက်ထဲကို လွှဲအပ်ခဲ့ပြီ Mr. Sam Chong က ထပ်ဆင့်ကမ် ပြန်ရောင်းစာခဲ့ပြီ Metro excel ကုမ္ပဏီကို ထပ်ဆင့်ကမ်း ပြန်ရောင်းစာခဲ့ပြန်ပါတယ် Metro ကုမ္ပဏီကို Mr. Sam Chong က တဆင့် ပြန်လွဲပြောင်းအပ်ခဲ့ ပြီ မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများပာာ အလုပ်ရှင်၏ အနိုင်ကျင့်မတရားခိုင်စေမှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ မြန်မာအလုပ်သမားယောက်(၃၁)တစ်ဦးသည် အလုပ်ရှင်၏ မတရားအကျင့်ခံနေရတာကို ပြန်ပြောဆိုခဲ့မှုကြောင့် အလုပ်ရှင်မှ ရဲတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့လာရောက် ခြိမ်းခြောက်ပြီ ညဘက်မှာ လူမိုက် ဂိုင်းစတာတွေ ခေါ်လာပြီ ၀ိုင်းရိုက်နှက် ဆဲဆိုပြုခဲ့ပြီ ထိုအလုပ်ရှင်က မြန်မာအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို နေရပ်နိုင်ငံပြန်ပို့ဆောင်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ ဒီလ ၇ ရက်နေ့က မြန်မာအလုပ်သမားခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးကို ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ် နောက်ထပ် ပြန်ပို့ဖို့ ပြုလုပ်ပြန်ပါတယ် ၈ ရက်နေ့တစ်ယောက် ၉ ရက်နေ့ကတစ်ယောက်နဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားနှစ်ဦးအား ပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီ အလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နှင့် အေးဂျင့်တို့က ပို့ဖိုစီစဉ်ခဲ့ပြီ လေဆိပ်ကို မြန်မာအလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ် အလုပ်ရှင်က လ၀ကနဲ့ ပူးပေါင်းပြီ ကယ်ဆယ်တုံး ထုပယ်ဖို့ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ မြန်မာအလုပ်သမား ၂ ယောက်က လေဆိပ်ကနေ ပြန်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီ မြန်မာအလုပ်သမားနှစ်ဦးပာာ မြန်မာပြည်က ARBOURFIELD. CO.LTD ကုမ္ပဏီထံ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိန်ဖေ (အငြိမ်းစာ)အား အကြောင်းကြားခဲ့ပြီ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိန်ဖေ၏ သား ကိုမိုး ငါ့တို့နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူ မင်းတို့က အလုပ်လုပ်တာအသုံးမကျလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ ဖုန်းကို လိုင်းဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ် နောက်တခါ မြန်မာအလုပ်သမားတွေက ထပ်ပြီ ဖုန်းဆက်ပြန်ပါတယ် မန်နေဂျာ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မြမြသန်းမှ ပြန်ပြောဆိုပါတယ် ငါတို့နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူ ငါ့လဲ မန်နေဂျာ ဒါရိုက်တာ မဟုတ်ဘူ ငါ့ကိုယ် ခဏခဏ ဖုန်းဆက်ပြီ လာပြောဆိုမနေနဲ့ဆိုပြီ ဖုန်းဆက်တိုင် မခိုင်းတော့ပဲ မြန်မာအလုပ်သမားတွေပာာ နေရာစရာ စာစရာမရှိတော့ပြီ နေစရာ စားစရာ အခက်အခဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် မလေးရှားရှိတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကူညီဆောင်ရွက်ရေးထံသို့ လာရောက် အကူအညီးတောင်ခံခဲ့ပြီး ထိုမြန်မာအလုပ်သမားနှစ်ဦး၏ပြဿနာကို သေသေချာချာစီစစ်ဆေးခဲ့ပြီ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအလုပ်သမားဌာနှင့် မလေးရှားကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့ချူပ်အပြင် ရှေ့နေကောင်စီများရုံထံသို့ အမှုဖွင့်ဆိုရန် ရှေ့နေကောင်စီရုံမှာ သွားရောက် စည်းတံဆိပ်တုံးထုခဲ့ပြီ မလေးရှားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်းရုံ၌ ဒီမြန်မာအလုပ်သမားနှစ်ယောက် အမှုပြဿနာပါတ်သက်ပြီ အလုပ်ရှင်နှင့် လူပွဲးစာအေးဂျင့်များ၏ လုပ်ရပ်များကို ပြန်လည်အရေးယူပေးပါရန် တောင်ဆိုးခဲ့ပါတယ် ထိုအပြင် မြန်မာအလုပ်သမားနှစ်ယောက်၏ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာကို ၀ိုင်ဝန်ကူညီပံ့ပိုသောအနေဖြင့် မလေးရှားအတိုက်ခံပါတီအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ပေါင်း ၈၂ ဖွဲ့ကျော်နီးပါ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံဌာနသို့ ထိုးထားတဲ့လက်မှတ်များကို ပို့ဆောင်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပြင် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ARBOURFIELD ., LTD. ကုမ္ပဏီမှ ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားအတော်များများ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဒီလိုပဲ ဒုက္ခရောက်တာအများကြီးဟု မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေကျတဲ့ တချို့မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ပြောဆိုနေအသံတွေ ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။
23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
3027K View Download
23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
4218K View Download
23 Feb 2011 Yeyintnge's Diary
Carleton University Holds Ceremony to Honour Aung San Suu Kyi
Former Conservative MP Flora MacDonald, who spoke after an award ceremony at Carleton yesterday, called Aung San Suu Kyi an “inspiration to everybody who is striving for their own personal freedom.”
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/23/2011 1 အကြံပြုခြင်း
အာဏာသုံးရပ်လုံး ပိုင်တဲ့ အတွင်းရေးမှူး – ၁
ဗမာပြည်မှာ အာဏာအရှိဆုံး ဘယ်သူလဲမေးရင် ယှဉ်ပြိုင်သူရှားတဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၁) နာမည် ရှစ်လုံးပိုင်ရှင်ပဲ ပြောရင် ရာနှုန်းပြည့် မှန်မယ်။ ယခင် အတွင်းရေးမှူး (၁) တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများနှင့်မတူ အာဏာအရပ်ရပ်ကို ခွဲကိုင်ထားပါ တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အကြီးအကဲဟုဆိုသော်လဲ မူဝါဒသာ ကိုင်တယ်။ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆုံးဖြတ် ခွင့်ပြုသူက အတွင်းရေးမှူး (၁) ပဲ၊ အမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်တာ လဲသူပဲ၊ ခန့်အပ်ခြင်းလဲ သူပဲ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစာချုပ် များကိုလဲ သူပဲ အတည်ပြုရင်ပြီးရော၊ ဒီနေရာမှာ မလိုတမျိုး၊ လိုတမျိုးပေါ့။ သူ့ကို လိုလေသေးမရှိ ပေးကျွေးနေတဲ့ ဇော် ဇော်၊ ထွန်းမြင့်နိုင် တို့နှင့် ပတ်သက်တဲ့ စာချုပ်ဖြစ်ရင် မစိစစ်ဘဲ တင်လိုက်တာနဲ့ ခွင့်ပြုပြီးသားပဲ၊ သူတို့ (၂) ဦး မဟုတ် လို့ကတော့ ကျန်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အာဏာနှင့် အနိုင်ကျင့်ပြီး ရက်ရက်စက်စက်၊ ပက်ပက်စက်စက်၊ ကြမ်း ကြမ်းတမ်း တမ်း ဆိုလိုက်ပြောလိုက်တာ ဘေးကလူတွေ မကြားဝံ့မနာသာပါ။ ဘယ်လိုပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် အစီအစဉ်ကျကျ တင်စေ အုံးတော့ ခဏထားအုံး ပြန်စိစစ်ပါအုံး၊ အမိန့်ချလိုက်တာပဲ။
၀န်ကြီးများက ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ဇော်ဇော်၊ ထွန်းမြင့်နိုင်အနေနဲ့ တင်ပြရင် စက္ကန့် (၃၀) အတွင်း အတည်ပြုပြီး ဖြစ်မည်ဟု ငြီးတွားပြသည်။
ဒီဘ၀မှာ အတွင်းရေးမှူး (၁) ချစ်သော ဇော်ဇော်၊ ထွန်းမြင့်နိုင် မဖြစ်ရလေချင်း၊ သူတို့လို မပေးကမ်းနိုင်လို့ အဆဲအဆို ဘ၀ လူကြားသူကြားမရှောင် ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ အပြောခံရတဲ့ ဘ၀မှ ဘယ်တော့ လွတ်ကင်းပါ့မလဲလို့ အချင်းချင်း ဖွင့်ဟပြောနေတယ်လို့ နေပြည်တော် အရာရှိတဦးထံမှ သိရှိရပါတယ်။
ပေးပို့သူ … ဒင်္ဂါး
၂ဝ၁၁ ဘတ်ဂျက် ဥပဒေ က လွှတ်တော် မစ ခင် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် နေ့ နေ့စွဲ နဲ့ ပြဌာန်း
ကနေ့ည ဗွီအိုအေ မြန်မာသတင်းထဲ ကြားရ တာ လေးပါ ။ လာ မဲ့ ၂ဝ၁၁ ဘတ်ဂျက် ဥပဒေ
က လွှတ်တော် မစ ခင် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် နေ့ နေ့စွဲ နဲ့ ပြဌာန်း ပြီးပြီ လို့ ပြောသွား
ပါတယ် ။ ဒီ ဥပဒေ ကို ဖတ်ပြီး တဲ့ အန်ဒီအက်ဖ် အမတ်မင်း တို့ ၊ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ
ဥကဌ ဦးသုဝေ တို့ ၊ ခင်မောင်ညို ( ဘောဂဗေဒ ) တို့ က ဆွေးနွေးသွားတာ ကြားရပါတယ်။
ဒီ ဘတ်ဂျက်ဥပဒေ ကို လွှတ်တော် မှာ ဘာကြောင့် မတင်သလဲ ၊ ဆွေးနွေး ကြ သလို
သူတို့ ပြော သွား တာ တွေ က လွှတ်တော် မစ ခင် လက်ရှိ အစိုးရ က ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်
သည် များ ကို ဥပဒေပြဌာန်း ဆောင်ရွက် နိုင်ခွင့် ရှိ တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေ ကို ညွှန်းပြီး
လွှတ်တော် စကာနီး လေး အချိန် မှာ မှ ၊ နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ပြဌာန်းချက် အနေ နဲ့
ကြို တင် ဥပဒေ သဘော လုပ် ထား ကြ ပါ သတဲ့ လို့ ပြော သွား ကြ ပါ သ ဗျ။
ခင်မောင်ညို ( ဘောဂဗေဒ ) ပြော သွား တာ က ၊ အခု လာမဲ့ နှစ် သုံး မဲ့ ဘတ်ဂျက် စာရင်း
စုစုပေါင်း က ဒီ နေ့ ပေါက်ဈေး နဲ့ ဆိုရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ခုနှစ် ဘီလျံ သာသာ ဘဲ ရှိ
ပါ တယ် တဲ့ ၊ သိပ် များ များ မရှိ ပါဘူး တဲ့ ခင် ဗျ ၊ဒီ ပိုက် ဆံ က လဲ ၊ ဘကုန်း ကုလား ၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံ သားတွေ က နိုင်ငံရပ်ခြား အပြင် ထွက် လုပ် ကြ တဲ့ လူ တွေ က ၊
သူတို့ နိုင်ငံ အတွင်း မိသားစု တွေ အတွက် ဟွန်ဒီ လွှဲ သလောက် ဘဲရှိ ပါ တယ် တဲ့ ခင် ဗျ ။
ခါတိုင်း က ကာကွယ်ရေး အသုံးစာရိတ် က ၄ဝ % လောက် သုံးပေမဲ့ ၊ ဒီ နှစ် က ၂၅ %
လောက် ဘဲ သုံး ဘို့ ဘတ်ဂျက် ဆွဲထား ပါ တယ် တဲ့ ၊ ပညာ ရေး က ၃ % နဲ့ ကျန်းမာရေး
က ၄ % လောက် ရှိ ပါမယ် တဲ့ ၊ ဒီ နှုန်း နဲ့ ဆို ရင် ပညာရေး ဘတ်ဂျက် က အီသီယိုပီးယား
နိုင်ငံ ရဲ့ ပညာရေး ဘတ်ဂျက် ထက် အများကြီး ရော့ နဲ နေ တာ တွေ့ ရ ပါ သတဲ့ ဗျ။
ဒီ နှုန်းတွေ က စစ်အစိုးရ ရဲ့ နှစ်စဉ် သုံးနေကျ ရာနှုန်း တွေ နဲ့ သိပ် ထူးထူး ခြားခြား မရှိ
ပါဘူး တဲ့ ၊ ဒီ လို စာရင်းဇယား မျိုး က လုံးဝ မမြင် ရ တာ ၁ဝ နှစ် လောက် ရှိ ပါ တယ် တဲ့
ခင် ဗျ ။ ခု လို တရားဝင် မြင် ရ ဘော် ရ လာ တာ ဘဲ ၊
သူ တို့ က အရင် ကြေနပ် ရ မှာ ပါ လို့ ပြော ကြ ပါတယ်
သူ တို့ ပြော တာ တွေ ခြုံ ကြည့် ရရင် မနှစ် က နဲ့ သိပ် မထူး ဘူး ၊ သုံး မဲ့ ပိုက် ဆံ
ပမာဏ က လဲ များများ စား စား တိုး မလာ ဘူး ဆို တာ က စဉ်းစား စရာ ဖြစ် ပါတယ်။
ပညာရေး လို ကျန်းမာရေး လို ဘတ်ဂျက် တွေ မှာ ရာ နှုန်း အများစု က အဲဒီ က ဝန်ထမ်း
တွေ အတွက် လ ခ ပါ။ လစာ ၂ ဆ ပေး မယ် ဆိုရင် ဘတ်ဂျက် က ၂ ဆ နီး ပါး တိုး လာ
ဘို့ လို သလို ၊ ၃ ဆ တိုး မယ် ဆို ရင် ဘတ်ဂျက် အသုံး စုစုပေါင်း က ဂဏန်းတွေ
ဘတ်ဂျက် စာရင်း မှာ ဖောင်း ပွ ပြီး ဂဏန်း အတော်ကြီး နေ ရ မှာ ပါ။
ခု လို သိပ် ထူးထူး ခြားခြား တိုးပြီး ဆွဲထား တာ မတွေ့ ရ တော့ ၊ လူတွေ လ စာ တိုး မယ်
ဆို ပြီး ထင် တလုံး နဲ့ လုပ် နေ သူ တွေ မှန် ကြ ပ မလား ဗျာ။
တော် ကြာ၊ ထင် တလုံး နဲ့ သူ သူ ငါ ငါ ၊ လက် ဦးအောင် ကုန် ဈေး တွေ တင် နေ ကြ ရင်
လူ တွေ မှာ ကုန် ဈေး နှုန်း တက် တဲ့ ဒါဏ် ကို ဘဲ အကြောင်း မဲ့ ခံ နေ ရ ပါ ဦး မယ်။
ဝေ ဘန် မှု နဲ့ စဉ်း စား မှု ပြု နိုင် ကြ အောင် ပါ ပ ဗျား ။
ဒီဥပဒေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းမှာ ထည့်သွင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ အများပြည်သူကို ထုတ်ပြန် အသိပေးတာ မရှိသေးပါဘူး။ အခုလို နိုင်ငံမှာ အရေးကြီးဆုံး ဥပဒေတခုကို စစ်အစိုးရက ဘာ့ကြောင့် လျို့ဝှက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သလဲ၊ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလို လွှတ်တော်မှာ အကျေအလည် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှ အတည်ပြု ထုတ်ပြန်တာမျိုး ဘာ့ကြောင့် မလုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေပေါ်မှာ သုံးသပ်သူတွေရဲ့ အမြင်များကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးတေဇ အား ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ရှင်းခိုင်း သလော
Updated ယနေ့ ည ၁၂ နာရီ အထိ ဦးတေဇ ကို ကယ်ဆယ်ခြင်း မပြု နိုင် ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဦး တေ ဇ သည် ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး သန်း ရွှေ ၏ ပိုင် ဆိုင်မှု ငွေများ ကို ကူမင်းဘဏ်သို့ သွား
ရောက် လွှဲပြောင်း ပေး အပြီး တွင် ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သတင်းရရှိ
ဦးတေဇ ရဟတ် ယာဉ် ပျက် ကျမှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက် ဆက်တွဲ ထပ်မံ ရရှိသည့် သတင်း
များ အရ ကူမင်း မြို့ မှ ပြန်လာ သော ရဟတ် ယာဉ် သည် ပူတာ အို မြို့ တွင် ဆီဖြည့်ရန် စီစဉ်
ထားစဉ် အတွင်း ရဟတ်ယာဉ် ပေါ် တွင် သူ နှင့် အတူ ပါရှိ လာသူ တစ်ဦး က ဦးတေဇ အား
လုပ်ကြံရန် စီစဉ် ခိုက် ရဟတ် ယာဉ် ပေါ် တွင် ရုတ်ရင်း ဆန် ခတ် မှု များ ဖြစ်ပွား ကာ ပျက်ကျ
ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု နေပြည်တော် သတင်း ရပ် ကွက် တွင် သုံးသပ် ပြောဆိုကြသည်။
ဦးတေဇ အား မည် သူက လုပ်ကြံသည် မည်သူ က လုပ်ကြံခိုင်း သည် ဆို သည့် သတင်းများ
ကို မူ Freedom News Group မှ အတည်ပြု နိုင် သေးခြင်း မရှိပါ။
၂၀၀၀ ခုနှစ် က နအဖ စစ်ကောင်စီ အဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး နှင့် ဗိုလ်
ချုပ် သူရ သီဟသူရ စစ်မောင် နှင့် အဖွဲ့ မှာ ကရင်ပြည်နယ် ဘာအံခရိုင် တရုတ်စု ကျေးရွာ
အနီး ရှိ သံလွင် မြစ် အနီး တွင် ရဟတ်ယာဉ် ပျက် ကျပြီး ကွယ်လွန် ခဲ့ရာ တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှုး
ကြီး သန်းရွှေ က လုပ်ကြံခိုင်း သည် ဟု သတင်း များ ထွက် ပေါ်ခဲ့သည်။
ယမန်နေ့ က ဖုန်ဂါရီဇီ နှင်းတောင် နံရံ ကို ၀င်ရောက် တိုင်မိပြီး ပျက်ကျသွားသည့် ရဟတ်ယာဉ်တွင် ပါရှိ သွား သည့် ဦးတေဇ
ယမန် နေ့ က မြန်မာ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဖုန်ကန်ရာဇီ ရှိ နှင်းတောင်ကြောတစ်ခု ၏ နံရံ ကို တိုက်မိပြီး
ဆုချီးမြှင့်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကမ္ဘာတလွှားမှာ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရဖို့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ထူးထူးချွန်ချွန် ဦးဆောင် လှုပ်ရှားနေတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ Carleton တက္ကသိုလ် အဓိပတိ Roseann O’Reilly Runte က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် မနေ့က ကျင်းပတဲ့ ဘွဲ့ချီးမြှင့်ပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
By ဦးသားညွန့်ဦး အင်္ဂါ, 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
ဇွန်ခေါင်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာပြည်ကို ပထမဆုံး လာရောက်သော နိုင်ငံခြားသားများအဖို့ သူတို့သုံးနေသော တယ်လီဖုံး ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ လျှပ်စစ်၊ အင်တာနက် စသည်တို့ကို ချီးကျူးပြောဆိုနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများကို တွေ့လျှင် အံ့သြသွားကြမည် ဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုလျှင် သူတို့သည် ဤတယ်လီဖုံး ဝန်ဆောင်မှုစနစ်၊ လျှပ်စစ်၊ အင်တာနက် စသည်တို့ကို မသုံးစွဲခဲ့ရသဖြင့် ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာနှင့် အံ့အားသင့်စရာ နောက်တချက်မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖြစ်သည်။
၁၉၉ဝ စုနှစ်များ အစောပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို စွန့်ပစ်လိုက်ပြီးကတည်းက စစ်အစိုးရသည် ဈေးကွက်အသားပေး စီးပွားရေးစနစ်ကို တရားဝင် ချမှတ်ကျင့်သုံးနေပြီဆိုသည်ကို အားလုံး အသိပင်။
သို့သော် အမှန်တကယ် မြန်မာ့ဈေးကွက်အသားပေး စီးပွားရေးစနစ် မည်သို့မည်ပုံရှိသည်ကိုမူ သိရှိသူ မရှိပါ။ ဤစီးပွားရေးစနစ်သည် ယခုမှ မွေးကင်းစ အဆင့်တွင် ရှိသေးသည်။ ဗဟိုမှချုပ်ကိုင်သော စီးပွားရေးစနစ်နှင့် ခေါက်ရိုးကျိုးနေသူများကသာ နိုင်ငံပိုင်ရော၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကဏ္ဍတွင်ပါ ခိုင်မာစွာ ဆက်လက် ချုပ်ကိုင်ထားကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ အဓိကလက္ခဏာမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပင် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရသည်မှာလည်း ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အစိုးရကျင့်သုံးသော ငွေကြေးမူဝါဒကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ဝင်ငွေသာ ရရှိကြသော လခစားများနှင့် ပင်စင်စားများမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု မြင့်မားမှုဒဏ်ကို နေ့စဉ် ခံကြရသည်။ အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ခကို အစိုးရက မကြာခဏ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အလုပ်သမားများက ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများနှင့်စာလျှင် အခြေအနေ ကောင်းသေးသည်။ အချို့သော ကံကောင်းသူများကမူ သူတို့လုပ်အားနှင့် ထိုက်တန်စွာ လုပ်ခကောင်းကောင်း ရကြသည်။ ထိုသူများမှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော ရှော့ပင်းစင်တာများ၊ အနှိပ်ခန်း စပါးရေချိုးခန်း၊ အဆင့်မြင့် အလှပြုပြင်ဆိုင် စသည့် ကြေးကြီးပေးရသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ယခုမူ မြန်မာပြည်၏ ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစားနှင့် သူတို့မိသားစု အများအပြားသည် ချောင်းသာနှင့် ပုဂံကို မသွားတော့ဘဲ ဥရောပနှင့် အမေရိကသို့ အားလပ်ရက် အလည်အပတ်ခရီးများ ထွက်နေကြသည်။
ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရများ လက်ထက်တွင် ခွဲတမ်းရသမျှ ကုန်ပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်သာ တင်းတိမ်ခဲ့ရသော စားသုံးသူအချို့လည်း ယခုအခါ ပိုလျှံလာသော ဝင်ငွေများဖြင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှ တင်သွင်းလာသော သွင်းကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ကြပြီ ဖြစ်သည်။
သို့သော် အဆိုပါ ကံကောင်းသူတို့မှာလည်း ရွေးချယ်စရာ စားသုံးကုန်စည် ဝန်ဆောင်မှု ဖောဖောသီသီ မရှိလှပါ။ ဆင်းရဲသူများနှင့် မကွာလှပါ။ အကြောင်းမူ မြန်မာ့ဈေးကွက်တွင် ရွေးချယ်စရာ ကုန်ပစ္စည်းများများ မရှိ၍ ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ စစ်အစိုးရက စီးပွားရေးကို ဖွင့်ပေးပြီး၊ တဟုန်ထိုး တက်လာစေရေး နှိုးဆွပေးရန် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ ရောင်းသူဈေးကွက်ဖြစ်နေပြီး၊ ကုန်သည်များ၊ သွင်းကုန်သမားများက လက်ဝါးကြီးအုပ် ချယ်လှယ် ကြီးစိုးနေကြသည်။ ဤစနစ်ကြောင့် လူနည်းစုက အားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားသော စနစ်ကို ဖန်တီးပေးလိုက်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် စားသုံးသူ အခွင့်အရေး၊ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး စသည်တို့ မရှိတော့ပေ။ ဤသို့ဖြင့် ဝင်ငွေနည်း စားသုံးသူများအနေဖြင့် ရွေးချယ်စရာ သိပ်မရှိတော့ပေ။
နောက်ထပ် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဈေးနှုန်းမှန်သမျှ အတက်ချည်းသာ ဖြစ်နေပြီး၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့် ဈေးကျသွားသည် ဆိုသည်မှာ အတော်ရှားပါးသွားတော့သည်။ ဤသို့သော ခြွင်းချက် အဖြစ်အပျက်မျိုး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်ကုန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သိမ်းဆည်းရမိသော ကားများကို အစိုးရက ဆက်တိုက် လေလံတင် ရောင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကားဈေးများ ထိုးကျသွားခဲ့သည်။ ယင်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ငွေကြေးနှင့် ငွေပေါ်လွယ်မှုမှာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အစိုးရဆီသို့သာ စီးဆင်းနေလေ့ ရှိသည်ကို ပြသနေသည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အတွင်း ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ၂၅ % မြင့်တက်သွားခဲ့သဖြင့် အခြေခံကုန် စည်တင်ပို့သူ ဒေသခံ ပို့ကုန်သမားများ အထိနာခဲ့သည်။ သွင်းကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သော အိုင်တီပစ္စည်းကဲ့သို့ ပစ္စည်းမျိုးမှာမူ ဈေးကျသည်ဟူ၍ မရှိလှပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဒေသတွင်း ထုတ်လုပ်သော မရှိမဖြစ် ကုန်စည်များ၊ စားသုံးကုန်စည်များမှာမူ ဝယ်လိုအား တိုးတက်နေခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်များ တက်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကုန်သည်များက အမြတ်ထုတ်သောကြောင့်သော် လည်းကောင်း ဈေးနှုန်းများမှာ တက်၍သာ နေတော့သည်။
သတင်းစီးဆင်းမှုကို တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသော နိုင်ငံ၌ ကောလာဟလ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း လျှော့တွက်၍ မဖြစ်ပါ။ အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝသော မြန်မာများအတွက်မူ ကောလာဟလများသည် နောင်အခါ အမှန်သတင်းများ ဖြစ်လာမည်ဆိုသည်ကို သိနေသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယပတ်အတွင်း ရွှေနှင့် ဒေါ်လာဈေးများ ရုတ်တရက် ထိုးတက်သွားခြင်းသည်လည်း ကောလာဟလများကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများကို လခတိုးပေးတော့မည်ဆိုသော သတင်းများ ပေါ်ထွက်လာ၍ လည်းကောင်း ၊ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ရှိပါ့မလားဆိုသော စိုးရိမ်ချက်များ ပေါ်ထွက်လာ၍လည်း ထိုသို့ဈေးများ ခုန်တက်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အနားယူလျှင် သော်လည်းကောင်း ၊ အဖြုတ်ခံရလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ အကြီးတန်း စစ်အရာရှိကြီးများ နေရာအပြောင်းအရွှေ့ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် သော်လည်းကောင်း ထိုအရာရှိကြီးများနှင့် နီးစပ်သော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကြီးမားသော ထိခိုက်မှုများ ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်မည့် သူများအနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ မချခင်ရော၊ ချပြီးနောက်တွင်ပါ အဆိုပါ ကောလာဟလများကို လေ့လာစောင့်ကြည့်နေရန် လိုအပ်သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးအကြောင်း နားလည်ရန် လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်၊ ဗေဒင်ဖတ် တတ်ရန်လည်း အရေးကြီးသော အချက်တချက် ဖြစ်သည်။
(ဇွန်ခေါင်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးလောကကို လေ့လာနေသူတဦး ဖြစ်သည်။)
ကိုသန်းဝင်း (ရ.က.သ. ၈၈ )ပြောတဲ့ ကိုဖုန်းမော် ကစတဲ့...
အခေါက်အပွေး၊ အသွေးအရောင်နှင့်စေ့ထားသည့်တံခါး (မျို...
‘အာဇာနည်’ အဖြစ်နဲ့ သေမည်ဟု ၇၈ မိနစ် ကြာ ရူးကြောင်ေ...
ARBOURFIELD ., LTD.ကုမ္ပဏီမှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိန်ဖေ...
Carleton University Holds Ceremony to Honour Aung ...
၂ဝ၁၁ ဘတ်ဂျက် ဥပဒေ က လွှတ်တော် မစ ခင် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရ...
နာမည်ကြီး ကနေဒါတက္ကသိုလ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါရ...